Xaalada Odegaard Oo Meel Kale Maraysa Iyadoo Arsenal Ay Dooneeyso Saxiix Joogto Ah – Garsoore Sports
Xaalada Odegaard Oo…
Fursadaha Arsenal ay kula soo saxiixan karto Martin Odegaard heshiis joogto ah ayaa sare u kacay kaddib qaab ciyaareedyo wanaagsan oo taxane ah, sida lasoo warinayo.
Xiddigan reer Norway ayaa heshiis lix bilood oo amaah ah u saxiixay Gunners bishii Janaayo, iyadoo qaar badan oo ka mid ah dadka ka fallarda cayaaraha ay waqtigaas u’aal ka keeneen heshiiska iyagoo gunners ku eedeeynaya inag isku qasaariyeen saxiixan maadaama uu usoo baxay Emile Smith Rowe.
Odegaard ayaa tan iyo markaas cadeeyay inuu yahay saxiix layaableh, si kastaba ha noqotee, qaab ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay ee uu kaga horyimid kooxaha London ka dhisan ee Tottenham iyo West Ham ayaa sare u qaaday rajada taageerayaasha Arsenal ee xagaaga.
Odegaard, oo weli 22 jir ah, ayaa durbaba dhaliyay labo gool 12 kulan oo uu u ciyaaray Arsenal, oo ay ku jiraan goolashiisii ​​Europa League ee uu ka horyimid Olympiacos iyo barbarihii muhiimka ahaa ee kulankii North London derby ee Tottenham.
Da ‘yarka ayaa mar kale soo jiitay indhaha jamaahiirta iyada oo Arsenal ay ka soo kabatay goolal 3-0 si ay barbardhac 3-3 ah ula gasho kooxda West Ham Axaddii, Odegaard ayaana door muhiim ah ka ciyaaray kulankii labaad ee Gunners.
Kaddib bandhigyadan ilqabadka leh rajadii ay Gunners ka qabtay in Odegaard uu noqdo xiddig Arsenal ah billowga xilli ciyaareedka soo aadan ayaa sare u kacday, hayeeshee Gunners rajada ay ka leedahay saxiixiisa ayaa wiiqi karta maadaama kooxda milkiyadiisa iska leh ee Real Madrid ay u aragto ‘mid kamid ah mustaqbalka’ waa sida wararka qaar tibaaxayaan.
Horraantii bishan warar so baxayay ayaa sidoo kale sheegayay in Odegaard uu doonayo inuu sii joogi Waqooyiga London kana codsaday wakiilkiisa in uu kooxda Real la billaabo wadahadalo ku aadan in uu sii joogo Gunners.
Haddii ay Arsenal ugu dambeyn ku guuleysato saxiixa Odegaard ee heshiis joogto ah, saameynta Mikel Arteta ayaa noqon doonta mid muhiim ah.
Kaddib barbarihii madaddaalada lahaa ee ka dhacay London Stadium, tababaraha reer Spain ayaa shaaca ka qaaday in Odegaard uu hoggaamiye ka ahaa qolka labiska tan iyo markii uu yimid.
‘Hagaag, wuxuu muujinayaa habdhaqankan laga billaabo wiiggii koowaad,’ ayuu yiri.
‘Qaabka uu garoonka ugu baxo, marwalba wuxuu doonayaa kubbada, sida uu u amro raacashada. Runtii wuu saameyn badnaa. ‘
Arrinta xiisaha leh ayaa ah in Arteta uu sidoo kale shaaca ka qaaday in xirfadaha hoggaamineed ee Odegaard ay dhab ahaan ka yaabiyeen isaga, marka loo eego dabeecaddiisa aamusnaanta.
” Waxaan u maleynayaa inaan dhamaanteen la yaabnay sababtoo ah wuxuu umuuqdaa mid runti xishood badan oo is-hoosaysiinaya, laakiin markii uu garoonkaas soo baxo waa dabeecad dhab ah wuxuuna jecel yahay inuu ciyaaro kubbadda cagta, ” ayuu raaciyay.
Rabitaanka Arsenal ee ku aadan saxiixa Odegaard ma naaqusayo marnaba sida lasoo warinayo, maadaama tababare Arteta uu aad ula dhacsanyahay Odegaard waxaana ay u badantahay in ugu yaraan haddii ay lasoo saxiixan waayaan ay amaah xilli-cayaareed kale ah kulasoo wareegaan.